53 job offers Star Moe Yan Group of Co.%2C Ltd. in all reg
We found 53 job offers Star Moe Yan Group of Co.%2C Ltd. in all regions of Myanmar
Star Moe Yan Group of Co., Ltd.
•	လုပ်သက် အနည်းဆုံ3းနှစ်ရှိ ရမည်။ •	ပိတ်ရက် တစ်ပတ်တစ်ရက် Rotate Off.Gazetted Holiday Off. •	အလုပ်ချိန် 83း0 am မှ 53း0 pm
•	Coordinate with on going construction site and the management •	Quantity check the sub contractors •	Negotiation with client project management team and Report project update to the management •	Technical explanation to the potential clients and architects together with Marketing & Sales Units •	Manage Technical inspection to the ongoing site regularly •	Construction Management & Site Survey
•	အပြင်သွားနိုင်ရမည်။ •	လမ်းမတော်မြို့နယ်၏ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်။
•	စာချုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	လမ်းမတော်မြို့နယ်၏ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	Sale & Marketing (Wholesales) •	Good communication skills.
•	No Experience. •	Good communication skills.
•	Assistant Manager (Academic & Marketing) •	Customer/Public Relation နားလည်တက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ဈေးကွက်သစ်များ ဦးဆောင်ရှာဖွေပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Thai Language အား ဘာသာပြန်ဆို၍ ရှင်းပြပေးနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ၈နာရီခွဲ မှ ၅နာရီခွဲ အထိ။ •	စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
•	ပိတ်ရက် တစ်ပတ်တစ်ရက် Rotate Off.Gazetted Holiday Off. •	အလုပ်ချိန် 83း0 am မှ 53း0 pm
•	Good Computer Skill. •	Good communication skills.
•	Sales Assistant (Real Estate) •	Good communication skills.
•	အလုပ်ချိန်9: 00Am to6: 00PM •	Sunday ပိတ်သည် •	အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်သည်။